China ASA Sịntetik resin Ngidi factory na-emepụta | CO-emeri
10 Afọ No Agba aṅacha
Elu corrosion Nguzogide
Magburu onwe Anti-UV Performance
The ASA sịntetik resin tile bụ ụdị Spanish style sịntetik resin ụlọ tile. ASA bụ ụdị ternary polima co-extruded site atọ di iche iche nke ihe na otu oge: acrylonitrile, styrene, na acrylate. Ma abụọ oyi akwa ma ọ bụ atọ-oyi akwa co-extrusion technology na a etinyere maka ihe mmepụta.
①The doro nke ukwuu ihu igwe na-eguzogide ọgwụ engineering resin ASA, na-eme ka n'aka na n'elu oyi akwa nwere ọ dịkarịa ala afọ 10 'agba kwụsie ike, elu UV-eguzogide, na magburu onwe corrosion eguzogide nakwa.
② Good quality gbanwetụrụ ịkwanyere ihe na-elu ike na nakweere iji hụ na ike mgbe o megideghị na rigidity.
③Adopts elu ike iji hụ ma ume ma rigidity. The pụrụ iche ihe na-enye echiche nke ohere, na-eme ka ụlọ n'ime ime anya onwunwu.
1. Long-adịgide adịgide Agba Kwụsie
2. Elu corrosion Nguzogide
3. Ịtụnanya okpomọkụ mkpuchi
4. Ukwuu ọku eguzogide ọgwụ
5. Ahụkebe Waterproof Performance
6. adaba na Oru oma nwụnye
The Spanish style ASA ụlọ tile awade ezigbo roofing ihe onwunwe ngwọta mgbe ị na-eme atụmatụ iji mepụtaghachi gị mbadamba n'ime ulo-ikwū-ụlọ. Ọzọkwa, ọ bụ ụdị ejikarị ewu ihe owuwu maka amụkwasị, carports, n'ámá egwuregwu Villas, ezumike na obodo ntà, mobile obibi, prefabricated ụlọ, ubi ulo-ǹdò, nakwa dị ka ọtụtụ ndị ọzọ ụdị residential na azụmahịa ụlọ.
Previous: ASA resin tile ngwa
Next: Resin sịntetik tile
Fire Nguzogide Sịntetik Spanish ụlọ Ngidi
Mkpuchi Sịntetik ụlọ Ngidi
Plastic Sịntetik resin ụlọ Ngidi
Sịntetik Asa mpempe akwụkwọ N'ihi na ụlọ
Sịntetik corrugated ụlọ Ngidi
Sịntetik Plastic roofing Ihe
Sịntetik resin okpomọkụ mkpuchi ụlọ Ngidi
Sịntetik Terracotta ụlọ Ngidi
UV eguzogide ọgwụ resin Sịntetik roofing Ngidi
Sịntetik resin ụlọ Ngidi
sịntetik resin plastic roofing ihe / mpempe akwụkwọ ...
Construction Ngidi 1050mm Nonflammable ịkwanyere resin ...
Ịkwanyere ụlọ akwụkwọ Direct Manufacturer ASA Syntheti ...
Chinese soplaya Esa ntekwasa ịkwanyere ụlọ taịl repl ...
Agba ntekwasa corrugated ịkwanyere Sịntetik resin Roo ...